Rotterdam Hague na ụgbọ elu Milan Bergamo na Transavia ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Rotterdam Hague na ụgbọ elu Milan Bergamo na Transavia ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akwụkwọ akụkọ Italy • Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ụgbọ elu si Rotterdam Hague gaa Milan Bergamo na Transavia ugbu a
Ịmalite ọrụ ugboro atọ ruo anọ kwa izu na obodo nke abụọ kachasị na Netherlands n'oge ọkọchị na-abịa, onye na-ebu ụgbọ ala Dutch ga-abawanye maapụ okporo ụzọ Milan Bergamo gaa n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ Europe.
Transavia amalitela njikọ na ọdụ ụgbọ elu Rotterdam Hague site na ọdụ ụgbọ elu Milan Bergamo.
Rotterdam bụ nnukwu ụlọ ọrụ logistic na akụ na ụba yana mgbakwunye dị mkpa na netwọkụ Milan Bergamo.
Maka onye mmekọ ụgbọ elu ọhụrụ ịmata ikike nke ahịa a bụ akara ama ama nke ikike Lombardy na ịrị elu na -arịwanye elu.
Ọdụ ụgbọ elu Milan Bergamo ekwupụtala mmalite njikọ Transavia na Rotterdam The Hague, na -akara akara mgbakwunye ụgbọ elu ọhụrụ nke atọ n'ọnụ ụzọ Lombardy n'ọnwa ndị na -adịbeghị anya. Ịmalite ọrụ ugboro atọ ruo anọ kwa izu n'obodo nke abụọ kacha ibu na Netherlands n'oge ọkọchị na-abịa, onye na-ebu ụgbọ ala Dutch ga-abawanye nke ukwuu. Milan BergamoMap nke ụzọ ya na north-west Europe.
Giacomo Cattaneo, onye isi ụgbọ elu azụmahịa, SACBO na -ekwu, sị: “Ebe obibi n'ọdụ ụgbọ mmiri kacha ibu na Europe, Rotterdam bụ nnukwu logistic na etiti akụ na ụba yana mgbakwunye dị mkpa na netwọkụ anyị. Maka onye mmekọ ụgbọ elu ọhụrụ ịmata ikike nke ahịa a bụ akara ngosipụta nke ikike Lombardy na mmụba a na -achọ. ”
N'isonyere ọrụ etinyere na Milan Bergamo nye Eindhoven, mwepụta nke njikọ Transavia na Rotterdam ga-enye ndị na-ebu Air France-KLM òkè 30% nke netwọkụ Dutch ọdụ ụgbọ elu. Ugbu a na -enye ihe ruru ụgbọ elu 300 na Netherlands n'oge ọkọchị, mpaghara Lombardy ga -enwe njikọ dị mkpa na nnukwu akụ na ụba Europe nke asaa site na GDP.
Marcel de Nooijer, Transavia Onye isi ala kwuru, sị: “Anyị nwere obi ike na -atụ anya oge ọkọchị nke 2022 ma nwee obi ụtọ na mgbakwunye njikọ ọhụrụ anyị na Milan Bergamo. Nke a na -enyere anyị aka ịnọgide na -azaghachi ọchịchọ ndị njem anyị chọrọ ịchọpụta ebe ọhụrụ. N'oge ọkọchị a, anyị ahụla na ndị Dutch na -achọsi ike njem ọzọ, dịka ọmụmaatụ ezumike ma ọ bụ ileta ezinụlọ. Anyị na -ahụ na ntinye akwụkwọ maka mgbụsị akwụkwọ a na -atụtụ na anyị nwekwara atụmanya dị elu maka oge oyi. Anyị nwere olile anya na anyị ga -ebuga ike a ruo oge ọkọchị nke 2022. ”
Rotterdam Ọdụ ụgbọ elu Hague (nke bụbu ọdụ ụgbọ elu Rotterdam, Vliegveld Zestienhoven na Dutch), bụ obere ọdụ ụgbọ elu mba ofesi na -eje ozi Rotterdam, obodo nke abụọ kachasị na Netherlands na Hague, isi obodo nchịkwa ya na nke eze. Ọ dị 3 NM (5.6 km; 3.5 mi) n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Rotterdam na South Holland ma bụrụ ọdụ ụgbọ elu nke atọ kacha nwee ọgba na Netherlands.
Ọdụ ụgbọ elu Orio al Serio International, ewere dị ka Ọdụ ụgbọ elu Milan Bergamo, bụ ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke atọ kacha ekwo ekwo na Italy. Ọ dị na mpaghara ọchịchị Orio al Serio, 3.7 km southheast of Bergamo in Italy.